युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Sunday, 05.31.2020, 12:23am (GMT+5.5) Home Contact
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am (GMT+5.5)
जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ । डेढ महिनाभन्दा बढी समयदेखिको नाकाबन्दीले अबौैं अर्बको घाटा भैसकेको छ । जनताको जीवनस्तर अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । तराईका जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षाको अभाव छ । एउटा राष्ट्र असफल बन्ने आधारहरू नेपालमा तयार हुँदैछ ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने मेसोमा नेपालभित्रैका र भारतीय पक्ष लागेका छन् । कुनै पनि मुलुक असफल बन्नका कारणमा शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, न्यायमा सामान्य जनताको कमजोर पहुँच, गिर्दो आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचा लगायतलाई मानिन्छ । यसै त भूकम्पका कारण झण्डै सात सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको नेपालले भारतको नाकाबन्दीका कारण अहिलेसम्म सबै पक्षलाई मिलाएर झण्डै सोही हाराहारीको घाटा व्यहोरिसकेको छ । यसबीचमा दुई हजारभन्दा बढी उद्योगहरू बन्द भएका छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामान्य व्यवसाय समेत बन्द छ ।
नाकाबन्दीका कारण गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुने खतरा पैदा भएको छ । भारतको अमानवीय कार्य र सो कार्यलाई मलजल गर्नेहरूको हरकतले नेपाल साँच्चै असफल राष्ट्र बन्ने त हैन भन्ने चिन्ता जागृत छ । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका बेलामा पनि नेपालको अवस्था यस्तो थिएन । त्यतिबेला देशभित्रैका पक्षबीच युद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिले त देशभित्रको एउटा पक्ष बाह्य शक्तिलाई उचालेर नेपाल तहसनहस पार्न लागिपरेको छ ।
आन्दोलनका नाममा जे भैरहेको छ त्यो सहज रुपमा लिन सकिने विषय हैन । नेपालमा गर्नुपर्ने आन्दोलन सीमापारी गएर भैरहेको छ । दशगजामा बसेर नेपालतिर ढुंगामुडा गरेर सरकारलाई झुकाउने रणनीति उनीहरूको देखिए पनि दीर्घकालमा नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने मेसो त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सरकारले पनि आन्दोलनकारीलाई आन्दोलन स्थगित गरेर सहमतिमा आउने वातावरण बनाउन सकेको छैन भने आन्दोलनकारी पहिला आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूका कतिपय माग पूरा हुने हो भने नेपाल त्यसै पनि असफल हुन्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले मधेशवादी दल र मधेशी जनताले उठाएका जायज मागहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । सत्तापक्ष र विपक्षको खेल छोडेर मुलुक बचाउने अभियानमा नलाग्ने हो भने मधेश आन्दोलनको भैरहेको वितण्डाले भोलि अर्कै रुप नलेला भन्न सकिन्न । किनभने मधेश आन्दोलन र त्यसको उपजका रुपमा भित्रिएको नाकाबन्दीका कारण नागरिकको दैनिकी निकै नै कष्टपूर्ण बन्न थालेको छ र नेपाल असफल राष्ट्रको बाटोतिर अग्रसर भएको चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिंदै छ । उद्योग–व्यवसायीहरू टाटपल्टने स्थितिमा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न नसकेर कुँजिन थालेका छन् । जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात भएका सामान कलकत्ता बन्दरगाहमा विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार नेपाली आयातकर्ताले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिरिरहेका छन् । हालसम्म आयातकर्ताले ३ अर्ब २० करोडभन्दा बढी विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको छ । बन्दका कारण मात्र अर्थतन्त्रले प्रतिदिन २ अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ ।
नाकाबन्दीका कारण सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइसकेको छ । सरकारले ३ महिनामा उठाउने लक्ष्य राखेको ९५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा नाकाबन्दी र आन्दोलनको असर परेको छ । यसबीचमा जम्मा ७५ अर्ब ६६ करोडमात्र संकलन भएको छ । सवारी साधन करमा मात्र १ अर्ब घाटा भएको महाशाखाको तथ्यांक छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाका लागि सरकारले तोकेको राजस्व लक्ष्यमध्ये पनि भन्सार तथा भ्याटको संकलनमा हालको नाकाबन्दीले असर गरेको छ ।
उठ्ने मात्र हैन लगानीमा पनि त्यस्तै गिरावट आएको छ । लगानीको सम्भावना र लक्ष्यमा भारी कमी आउँदा अर्थतन्त्र खुम्चने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार विगत ८० दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १ अर्ब प्रतिकार्य दिनका दरले ऋण लगानी गर्ने सम्भावना थियो । तर लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आएका कारण ७० अर्ब जति सम्भावित ऋण प्रवाहमा असर परेको छ ।
नेपालको राजश्व निर्यातमूलक हैन आयातमूलक छ । त्यसैले पनि सानोतिनो राजनीतिक घटनाले पनि यसलाई प्रभावित तुल्याउँछ । भारतको नाकाबन्दीका कारण राजश्व उठ्तीमा मात्रै कमी आएको नभै आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारिसकेका कारण अब भावी दिनमा यस्ता समस्या आए पनि खासै समस्या नहुने बाटो अवलक्बन गर्नुपर्दछ । अब नेपालले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि उपलब्ध आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विकासको आफ्नै ढाँचा छनोट गरेर सोही अनुसारको लगानी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र दायित्व हो ।
तर, अहिलेकै संरचनाबाट यो कत्ति सम्भव छ भन्ने अहम् सवाल पनि उठिरहेको छ । राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप, राज्य संयन्त्रहरूको अकर्मण्यता र दाताहरूको स्वार्थबाट निर्देशित भएर कामगर्ने प्रवृत्ति एवं राजनीतिक संरक्षरणमा मौलाएको भ्रष्टाचारबाट मुलुक सर्वाधिक आहत छ । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताको जीवनमा तात्विक परिवर्तन नआउने तर, केही व्यक्तिलाई अवसर दिने र नवसंभ्रान्त वर्ग खडा गर्ने मेसो मात्र भैरहेको छ । यसले गदाए पनि देश र जनता निरन्तर कमजोर र निरीह बन्दैगएको अवस्था हो । यही अवस्थामा हुने विस्तार नै मुलुक असफल राष्ट्रका दिशातिर घचेटिने आधार हो । तसर्थ गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको नेपाल र नेपाली जनता जनताले रोजेको व्यवस्था र जनताले बनाएको संविधानपछि असफलताको दलदलमा भास्सिने खतरा बढ्नु भनेको यो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वका लागि कम्तिको चुनौति हैन । आगे उनीहरूकै मर्जी– देशलाई सफल र आत्मनिर्भर बनाउने कि असफल बनाएर बाह्य हस्तक्षेपको शिकार बनाउने ?
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)